YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, December 16
အမေရိကန်အစိုးရ၏ ခေတ္တအထူးကိုယ်စားလှယ်၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုံးခန်းသို့ရောက်ရှိ
88 Generation Students's photo. အမေရိကန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ခေတ္တအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် မူဝါဒရေးရာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး မစ္စတာပက်ထရစ်မာဖီနှင့် အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာဒဲရစ်မစ်ချယ်တို့သ... ည် အမေရိကန်သံရုံးမှတာဝန်ရှိသူအချို့လိုက်ပါလျက် ယနေ့(ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၅ ရက်)နံနက်(၉း၀၀)နာရီက ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုံးခန်းသို့ရောက်ရှိလာပြီး ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ် ကြသည့် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ပြုံးချို၊ ဂျင်မီ တို့နှင့်တွေ့ဆုံ၍ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရှိဒုက္ခသည် စခန်းများအရေး၊ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန္ဒပြမှုအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်း ခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
BY YeYint Nge ... 12/16/20120comment
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် မီဒီယာများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
အလုံမြို့နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးဝေရေးအဖွဲ့ရုံး၌ ယနေ့နေ့လည် တစ်နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက မီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်…အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးဝေရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦီးအောင်ခိုင်က မီဒီယာများကိုပြောကြားရာတွင် ” လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဌာနမှ ပြည်သူများ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လုံလောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေး ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ပြည်သူလူထုမှလည်း မလိုလားအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြုန်းတီးမှု မပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုသိရေးအတွက် တီဗွီ၊သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များမှ တစ်ဆင့် အသိပေးဖေါ်ပြရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးကို လမ်းညွှန်ပြသထားပါတယ်…။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထဲ ဓာတ်အားသုံးစွဲသူဦးရေ (၉)သိန်းခန့် ရှိရာ တစ်ဦးစီမှ မလိုအပ်သော လေးပေမီးချောင်း တစ်ချောင်းစီကို စွမ်းအင် ချွေတာ ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ လျှော့ချအသုံးပြုပါက လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပမာဏ (၃၆)မဂ္ဂါဝပ်လျော့ကျ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..ထိုပမာဏဟာ လက်ရှိရွာ မဓါတ်အားပေးစက်ရုံကြီး ဓါတ်ငွေ့ တာဘိုင်စက်နှစ်လုံးမှ ထုတ်ပေးလျှက်ရှိသော ဓါတ်အားပမာဏ (၃၁) မဂ္ဂါဝပ်ထက်ပင် ကျော်လွန်လျက်ရှိရာ အလွန်ထိရောက်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်..။ထိုထက်ပိုမိုပြီး လေးပေမီးချောင်း (၂) ချောင်းစီ လျှော့ ချ အသုံးပြုပါကလည်း လျော့ကျသွားမည့် ပမာဏမှာ (၇၂)မဂ္ဂါဝပ်လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမည့်နွေရာသီတွင် ပြည်သူ လူထုအနေနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိ မျှတစွာ သုံးစွဲနို်င်ရေးအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးဝေရေးအဖွဲ့မှ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း”အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
Sunday, 16 December 2012 07:29
Written by ဘဲလားလေဘာတီ
December 21, 2012 ခုနေ့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကြီး ပျက်လိမ့် မည် လို့ဆိုတဲ့ သတင်းက ၂၀၁၀ လောက်ဆီ ကတည်းက ရေပန်းစား နေခဲ့သလို မကြာခင်မှာပဲ ထိုမာယန်တို့၏ ပစ်မှတ် ဒီဇင်ဘာ၂၁ ရက်ကို ရောက်ဖို့ ရက်ပိုင်းသာ လိုတော့သည်။ ကမ္ဘာပျက် မည်ဆိုသော ဟောကိန်းက မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ထိုဟောကိန်းကို ရုပ်ရှင်ဖြင့် သရုပ်ဖော် ရိုက်ကူးလို့ ဒေါ်လာသန်း ရာပေါင်းများစွာကို သဲ့ယူသွား ကြသလို Website တွေကို လူစိတ်ဝင်စား လာရအောင် ဖန်တီး ယူနေကြပြီး အများစုက မာယန်ပြက္ခဒိန်ကို မှီ၍ စီးပွားတွေ ဖြစ်သွားကြသူတွေ ကလည်း ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေကြလျက်၊ မာယာပြက္ခဒိန်ရဲ့  ဟောကိန်း မတိုင်ခင်မှာလည်း ၁၉၉၉ ဇူလိုင်လမှာ ကမ္ဘာ့ အဏုမြူ စစ်ကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မယ်လို့ နော်ထရာဒမ်မတ်စ် Notradamus ရဲ့ ဟောကိန်းကိုမှီပြီး စာအုပ် ထုတ်သူတွေကလည်း သူတို့စာအုပ် Bestseller ရအောင် သတင်းမီဒီယာ တွေနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်ဇာတ်များ ဖြည့်စွက် ဖန်တီးခဲ့ကြသူ များကလည်း ရှိနေခဲ့ကြသလို အထူးသဖြင့် ဂျပန်မှာ အဏုမြူ ရောင်ခြည်ဒဏ်မှ လွတ်ရန် မြေအောက်ခန်း တွေ ကို ဆောက်ကြလို့ Gas Mask များကလည်း ၁၉၉၈ ကတည်းက ရောင်းပန်းတွေ လှနေခဲ့ဖူးသည်။ ဘယ်လောက်တောင်လည်း ဆိုတော့ ရုရှား မော်စကိုမှ အကြား အမြင် ဆရာမ တစ်ယောက်က ရုရှားအစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာလှည့် ၍ ၁၉၉၉ မှာ ကမ္ဘာပျက်မည့် အကြောင်းကို ရုရှားသံရုံးမှ တစ်ဆင့် သံအမတ် ကတော်များကို ဖိတ်ကြား၍ ဟောပြောပွဲများ လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဦးမှာ ထိုအကြားအမြင် ဆရာမလေးက မြန်မာပြည် ရုရှား သံရုံးကို ရောက်လာ ခဲ့ဖူးသည်။ ဒီတုန်းက ရုရှားသံရုံး၏ ဖိတ်ကြား ချက်ကြောင့် ဆရာဒဂုန်နဲ့ စာရေးသူက ရုရှားသံရုံး၌ ကျင်းပသော ထိုဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အကြားအမြင် ဆရာမလေးက လည်း နော်ထရာဒမ်မတ်စ် Notradamus ၏ဟောကိန်းကို သရုပ်ဖော် ဟောပြောခဲ့ပြန်သည်။ ဟောပြောပြီးလို့ ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးတာကို စားသုံး နေကြစဉ်မှာတော့ စာရေးသူနဲ့ သတင်းထောက်ဆရာ ဦးအောင်ရွှေဦး တို့က မယောင်မလည်နှင့် ဆရာမလေးဆီ ချဉ်းကပ်ပြီး ဘာကိုမှ မယုံတဲ့ ကွန်မြူနစ် ရုရှားက ဘာလို့ ဒီလိုဗေဒင်ဆရာမကို ကမ္ဘာပတ်ပြီး နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ ဒီလိုဟောပြောပွဲတွေ လုပ်ခိုင်းရတာလဲလို့ ဆရာ ဦးအောင်ရွှေဦးက မေးလိုက်တော့ ဒီလို ရှင်းပြခဲ့ဖူးသည်။ ဒီဆရာမ လေးက “ဘောရစ်ယဲလ်ဆင်”ကို လူတွေ ပခုံးပေါ် မြှောက်တင်ထားကြ တာကို ကျွန်မမျက်စိ မြင်ကွင်းထဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်လိုက်ရ တော့ ကျွန်မက ရဲရဲတင်းတင်း “ယဲလ်ဆင်”သမ္မတ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကြိုဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်လာတော့ ကျွန်မကို နိုင်ငံတော်က လူသားအားလုံးကို အသိအလင်းပေးဖို့ အခုလို စေလွှတ် ခဲ့တာပါပဲလို့ ပြောခဲ့သည်။
ဒီတော့ ကျွန်တော့်ဆရာ ဦးအောင်ရွှေဦးက ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အခြေအနေလေးကို တစ်ခုခု ပြောပေးနိုင်မလားလို့ မေးလိုက်ပါသည်။ ဒီတော့ ရုရှားဆရာမလေးက အတန်ငယ်စဉ်းစား ပြီး ကျွန်မ မြင်တာလေးကိုတော့ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ဒီမရောက်ခင် ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ ပတ်သက် လို့ ဘာမှမပြော မဟောဖို့ ကျွန်မတို့ဆီက သတိပေး ထားတာလေး ရှိနေတာမို့ ပြောရမှာတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်မအတွက် ထက် ရှင်တို့မှာ အန္တရာယ် ရှိသွားနိုင်တာမို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ မြင်တဲ့မြင် ကွင်းလေးတစ်ခုကိုတော့ ပြောပြခဲ့ပါ့မယ်။ ဟောကိန်းတော့ မထုတ် ပါရစေနဲ့။ ရှင်တို့ဘာသာ အဖြေ ရှာယူကြပါလို့ပြောပြီး သူမက "ကျွန်မ လေယာဉ်ပျံပေါ်က ဆင်းလာတော့ ရုတ်တရက် ကျွန်မ မျက်စိမြင်ကွင်း မှာ ပန်းပန်ထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ရှေ့မှာ စစ်သားတွေ လက်နက် ချနေတာကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်လိုက်ပါတယ်" လို့ ပြောပြီး သတင်းတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ပြောခဲ့ဖူးသည်။ သည်တုန်းကတော့ အမှတ် တမဲ့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆယ်စုတစ်စု ကျော်သွားတော့မှ မီဒီယာဇာတ်ခုံ ပေါ်မှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲဖြစ်နေတဲ့ အဲဒီပန်း ပန်ထားတဲ့မိန်းမကို တွေ့လိုက် ရသည်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ဆရာဦးအောင်ရွှေဦး ကတော့ လောကကြီး ကို မမျှော်လင့်ဘဲ စွန့်ခွာလို့သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတုန်းက အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်က မီဒီယာ စာမျက်နှာများပေါ် မရောက်သေးသလို သူပန်းပန်တာကို ရုရှားဆရာမလေး သိဖို့နေနေသာသာ ကျွန်တော်တို့ တောင် သတိမထား မိခဲ့ကြပေ။ ဆရာမလေး မြင်ခဲ့ သလို ပန်းပန်ထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရှေ့မှာ စစ်တပ်က လက်နက် ချနေကြတယ် ဆိုခဲ့သလိုပဲ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် လွတ်ပြီးတဲ့ အချိန်က စပြီး စစ်အစိုးရ ကလည်း အာဏာကို Surrender လုပ်သွားသကဲ့ သို့ပင်။ တိုင်းပြည်က စစ်အစိုးရနဲ့ ကင်းဝေးသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုချင်တာက ဟောကိန်းတစ်ခုကို လူတစ်ယောက် အတွက် ဟောမည်ဆိုပါက ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီပြီး ကြိုပြီး ဟောကိန်းထုတ်သော် မှန်နိုင်ပေသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာနဲ့ ချီပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းပေါင်းခုနစ်ထောင် အတွက်ကို စုစည်းလို့ ကမ္ဘာပျက်မည် ဆိုသောဟောကိန်း မျိုး ကတော့ အထက်ပါ အတိုင်း နော်ထရာဒမ်မတ်စ် ပဲ ဟောဟော Mayan Calendar တို့လို ကမ္ဘာပျက်မည် ဆိုသောဟောကိန်း မျိုးတွေ ကတော့ ပါစင်အောင် လွဲမှားသွားတတ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ သတ္တလောကကြီးကို သဘာဝတရား တို့ ဖြင့်ဖန်ဆင်းထားပြီး လူသတ္တဝါ အပေါင်းတို့ကိုတော့ အကြောင်း တရားတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒီတော့ လူသားတို့၌ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြောင်းတရားချင်းက မတူနိုင် သလို အကြောင်းတရားက ပေးထားသော သေခြင်းတရား၏ Timeline သက်တမ်းတွေကလည်း လုံးဝမတူနိုင်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ သန်းပေါင်း ခုနစ်ထောင်လုံး၏ သေခြင်းတရား တို့ကလည်း တစ်ချိန် တည်း တစ်ရက်တည်း၌ စုံ၍ မကျရောက်နိုင်ပေ။
သို့ဖြစ်၍ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အဏုမြူစစ်ကြီး ဖြစ်မည်၊ ကမ္ဘာကြီး ပျက်မည် ဆိုသော နော်ထရာဒမ်မတ်စ်၏ ဟောကိန်းကြီး ကလည်း ပါစင်အောင် လွဲမှားသွားခဲ့ရခြင်းပင် ဖြစ်သလို မာယန် ပြက္ခဒိန်၏ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် ၂ဝ၁၂ ခုနေ့ ကမ္ဘာပျက်မည် ဆိုသောဟောကိန်းကြီး ကလည်း ပါစင်အောင် လွဲမှား သွားရတော့မည်သာ။
သို့သော် မာယန်တို့၏ ဟောကိန်းက ဗေဒင်ဟောကိန်းတွေ မဟုတ်ဘဲ Astronomy အရ အာကာသဖြစ်စဉ် အာကာသ တွက်ရိုးတို့ ဖြင့် တွက်ချက် ဟောထားသော ဟောကိန်းများ ဖြစ်နေတာမို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ မပျက်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာမြေသို့ အသွင်မတူ သော သဘာဝ ဘေးရန်ကြီးနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြီးများတော့ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တစ်မူ ထူးခြားလို့ ကျရောက် လာနိုင်ဖွယ်တော့ ရှိမည်ဆိုတာ ကိုတော့ မာယန်ပြက္ခဒိန်က မီးမောင်းထိုး ပြထားခဲ့ ပါသည်။
ဒီတော့ မာယန်ပြက္ခဒိန်Mayan Calendar ဆိုတာဘာလဲ။
BC 2000 မှ AD 250 အထိ Mayan Civilization မာယန် ယဉ်ကျေးမှု ခေတ်ကြီးတစ်ခု ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ မာယန် နှောင်းခေတ် တစ်ခုကတော့ 250 AD မှ 900 AD အတွင်းအထိ ရှိနေ ခဲ့သေးတယ်လို့ ယူဆကြရပါတယ်။ အဲဒီ မာယန် ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အင်ပါယာ ကြီးက မက္ကဆီကို အလယ်ပိုင်းမှသည် Honduras-Guatemala North El Salvador စတဲ့ မြောက်အမေရိကနဲ့ တောင်အမေရိကကို ဆက် သွယ်ထားတဲ့ ကျွန်းဆွယ် တစ်ခုလုံးက ၄င်း မာယန်ယဉ်ကျေးမှု ခေတ်ရဲ့သြဇာ လွှမ်းမိုးခဲ့ဖူးပါသည်။ မာယန် ယဉ်ကျေးမှုခေတ်မှာ တခြား ခေတ်ကြီးများနှင့် တစ်မူ ထူးခြားနေခဲ့တာကတော့ သူတို့ခေတ် မှာ သင်္ချာ ဘာသာရပ်များနှင့် Astronomy အာကာသ သိပ္ပံပညာရပ် များ ထွန်းကား နေခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
သူတို့မှာ မူပိုင်းအာကာသ ဝေါဟာရ (Astronomy Terms) များ နှင့် သင်္ချာ ကိန်းဂဏန်းတွေ ရှိနေခဲ့ကြသလို မာယန်တို့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ လောက်ဆီက ပြက္ခဒိန် စနစ်က တစ်နှစ်မှာ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက် သတ်မှတ်ထားသော မျက်မှောက်ခေတ် ပြက္ခဒိန်နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ရှိနေတာကို ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရနိုင်အောင် မာယန်ပြက္ခဒိန်က သက်သေ ပြထားနိုင်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မာယန်တို့မှာ သူတို့ဘုရားဟာ အာကာသ တစ်နေရာမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှု တစ်ခုတည်းဖြင့် အာကာသ ကောင်းကင်မှာ ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေ ခဲ့ကြရာမှ မာယန်တို့ဟာ Astronomy အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေး နှင့် အာကာသ တွက်ရိုး ပညာရှင်များ ဖြစ်လာ ခဲ့ကြရခြင်းသာ ဖြစ်သလို အချို့မှာ ယနေ့ NASA ၏တွက်ကိန်းနှင့်ပင် ကွာဟမှု သိပ်မရှိတာ ကိုလည်း တွေ့ နေရပေသည်။
မာယန်တို့က နေ-လ နဲ့ သောကြာဂြိုဟ် တို့ကို အနီးကပ် လေ့ကြရာဝယ် သောကြာဂြိုဟ်ကို ပိုမို စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ သောကြာ ဂြိုဟ်က ကမ္ဘာနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အချိန် နေနှင့် ပူးယှဉ်ခြင်း Inferior Conjunction နှင့် သောကြာ-ကမ္ဘာနှင့် အဝေးဆုံး အချိန် superior conjunction နေနှင့် သောကြာတို့၏ အပူးအယှဉ် များကို လေ့လာ မှတ်သား ထားနိုင်ခဲ့ကြသလို သောကြာဂြိုဟ်က-ကမ္ဘာနှင့် အနီးဆုံး Inferior Conjunction ကမ္ဘာနှင့် နေအကြား ပူးယှဉ်ပြီး နောက်နေ့ နေအထွက် နံနက်ခင်းနှင့် ထိုနေ့ တစ်နေ့လုံးကို ပိုပြီးကြောက်တတ် ကြပြီး ဒီလိုနေ့မှာ လူတွေ ဒုက္ခ ပိုရောက်တတ်တယ်။ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ၊ စစ်မက် အင်္ဂါရပ်များလည်း ဖြစ်ပွား တတ်တယ်လို့ ယုံကြည် ထားခဲ့ကြပါသည်။
နောက် မာယန်တို့ဟာ လကို လေ့လာကြရာ မှာလည်း လဟာ ကမ္ဘာကို တစ်ပတ် ပတ်မိဖို့ နွေရာသီမှာ ရက်ပေါင်း ၂၉ ရက်ကြာတတ်ပြီး ကျန်ရာသီ တွေမှာတော့ ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာတတ်တာကို သူတို့ တွက်ချက် ထားကြရာမှာ ယနေ့ NASA ၏ တွက်ရိုး ၂၉.၅ ရက်နှင့် ဆိုပါက ထပ်တူထပ်မျှ ရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
သည်မာယန်တို့ခေတ်၌ အာကာသကြည့် မှန်ပြောင်းပင် မပေါ် သေးမီ ကတည်းက ခေတ်နှင့်မတန် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အာကာသနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ရိုးများနှင့် စူးစမ်းလေ့လာသမှု များကရှိနေခဲ့ပြီး နေကြတ်-လကြတ်ခြင်း များကိုပင် နှစ် ရာနှင့်ချီလို့ ကြိုတွက် ထားနိုင်ခဲ့ကြသလို ဤနေစကြဝဠာ အပြင် Milky Way နဂါး ငွေ့တန်းကဲ့သို့သော အလင်းနှစ် ထောင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာလှ သော စကြဝဠာတိုင်း လေ့လာတွက်ချက် ထားတာများကိုလည်း အံ့မခန်းနိုင် လောက်အောင် တွေ့ရှိနေရပြီး သူတို့ခေတ်မှာ ဆောက် လုပ်ထားခဲ့တဲ့ နန်းတော်ရာများ၊ ဘုရားကျောင်း ပိရမစ်ကြီးများနှင့် ထင်ရှားသော အဆောက်အအုံများကို အာကာသ သင်္ချာဗေဒများနှင့် အသေအချာ တွက်ချက်ပြီးမှသာ တည်ဆောက် ထားခဲ့ကြတာကို တွေ့နေရသလို များသော အားဖြင့် နန်းတော်ရာနှင့် ပိရမစ်များကို တောင်လတ္တီတွဒ် တွင် တည်ဆောက်လေ့ရှိကြသည်။ ဤသို့ တည်ဆောက်ရခြင်းကလည်း နေသည်တစ်နှစ်မှာ နှစ်ကြိမ် သူတို့၏ မွန်းတည့်မျဉ်းများအပေါ် ဖြတ်သန်းတာကို သိရှိထား၍ နန်းတော်ရာ များအပေါ် နေမင်းကိုဖြတ်သန်း စေခြင်းဖြင့် နေမင်း၏ စွမ်းပကား ကြောင့် မင်း၏ ဘုန်းကံတန်ခိုး ကြီးမြင့်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြခြင်း၊ နေထွက်ရောင်ခြည်ကို နန်းတော်ရာနှင့် ပိရမစ်များပေါ်သို့ အား ကောင်းစွာ ရရှိရေးကို လိုလားခဲ့ကြခြင်း ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
သည်သို့ဆိုလျှင် မာယန်တို့က နှစ်ထောင်နဲ့ချီ ကာလကတည်း က လတ္တီတွဒ်မျဉ်းများက ရှိနေတာမို့ သူတို့သူတို့ခေတ်၏ အာကာသ သိပ္ပံ၏အဆင့်ကို ဘယ်လိုမှ လျှော့တွက်၍ မရနိုင်တော့သလို မာယန် တို့က သာမန်အာကာသ သိပ္ပံမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း၏ အချိန်အကူးအပြောင်း (Timeline Transition) များကို ရှာဖွေ ထားခဲ့တာမို့ သူရိယ နေမင်းတို့၏ သက်တမ်းနှင့် နေကြတ် လကြတ် ခြင်းများ တင်မကဘဲ Milkey Way နဂါးငွေ့တန်း၏ အလယ်ဗဟို အီကွေတာနှင့် သူရိယနေမင်း တစ်တန်းတည်း ကျရောက်မည့် နေ့ ရက် လ-ခုနှစ်ကိုပင် အတိအကျ တွက်ချက် ထားနိုင်ခဲ့ကြပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ မာယန်တို့က ကမ္ဘာပျက်ကိန်းကို အဟောထုတ်ကြရာဝယ် သာမန် ဗေဒင်တွက်ရိုး ဗေဒင်နှင့် တွက်ချက် အဟောထုတ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘဲ Astronomy အာကာသ တွက်ရိုးတို့ဖြင့် ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းတို့ ၏ Timeline များကို တွက်ချက် ရှာဖွေခဲ့ကြရာဝယ် မာယန်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ နေ၏ သက်တမ်းကို ရှာဖွေခဲ့ကြရာမှာ ဒီအရင် နေမင်း လေးလုံး ပျက်သုဉ်း သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သလို လက်ရှိနေမင်းမှာ ပဉ္စမ မြောက် နေမင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဤနေမင်း၏ သက်တမ်းမှာ လာမည့် December 21, 2012 သောကြာနေ့တွင် ကုန်ဆုံး သွားရတော့မည်။ နေမင်းသည် တစ်စစီပေါက်ကွဲ ပျက်စီးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို တွက်ချက်၍ ဤမည်သော ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်း ကို ထုတ်ထားခဲ့ကြ ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
နေမင်းသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမည့် အချိန်ကိုတော့ Milkey Way နဂါးငွေ့တန်း၏ အီကွေတာ အလယ် ဗဟိုအမှတ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သူရိယနေမင်းတို့ တစ်တန်းတည်း ကျရောက်သွားမည့်ွှTransit နေ့ရက် အချိန်ကို တွက်ချက် စံထားခဲ့ကြဟန် ရှိနေပါသည်။ မာယန်တို့ ၏ ဟောကိန်းအတိုင်း ကမ္ဘာ မပျက်နိုင်ဟု ယူဆနိုင်ပါသော်လည်း မာယန်ပြက္ခဒိန် ကြောင့်ပင် ယနေ့ NASA နှင့် အာကာသ သိပ္ပံပညာ ရှင်တို့က ကမ္ဘာကြီးသို့ ကျရောက်လာနေသော ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု များနှင့် သဘာဝ ဘေးရန်များကို ပိုမို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြရပြီး မာယန် တို့တွက်ချက်ထားသော Galactic Transit က နှစ်သန်းပေါင်း ၆၄ သန်း မှာမှ တစ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ ရနိုင်ပြီး ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ မှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ (Satellite) ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး ယန္တရားများနှင့် အင်တာနက်များ၊ ဆဲလ်ဖုံးများ စသည့် ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေး ယန္တရားကြီး တစ်ခုလုံးသို့ အနှောင့်အယှက် များစွာ ဖြစ်လာနိုင်သည် ဟု ဆိုလာကြပြန် ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ အထက်ဖော်ပြခဲ့ပါ အတိုင်း သတ္တဝါတို့၏ အကြောင်း တရားတို့က သန်းပေါင်း ခုနစ်ထောင်တို့ အတွက် တစ်သားတည်း မကျနိုင်သလို ဘုရား သာသနာ ၅၀၀၀ ပင် မကုန်ဆုံး သေးတာမို့ ဘုရားသာသနာ တည်နေသရွေ့ ကမ္ဘာကြီး လုံးဝ ပျက်သွားနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိနိုင်သေးပေ။ သို့သော် မာယန်တို့က သူရိယ နေမင်းကြီး သက်တမ်းက ပေါက် ကွဲလို့ ပျက်သုဉ်းသွားမည် ဆိုသလို NASA က နေ၏ပေါက်ကွဲမှု တွေက ၁၁နှစ်တစ်ကြိမ် ပိုမို အားကြီးလာမည်။ နေမှာ အားကောင်း သော ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နေမှာ သံလိုက် မုန်တိုင်းတို့က ကမ္ဘာကြီး ၏ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသများသို့ ကျရောက် လာခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ မြေသို့ သဘာဝ ဘေးရန်များနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုတို့ကို ပိုမိုဖြစ် ပေါ်လာစေနိုင်သည် ဟု ဆိုထား ကြရာဝယ် ယနေ့ Solar Cycle 24 သို့ရောက်ရှိနေပြီး ဖြစ်တာမို့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တွင် သဘာဝ ဘေးရန်နှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုတို့က ပိုမိုအားကောင်း လာဖွယ် ရှိနေလိမ့်မည် ဟု မှတ်ချက် ပေးထားကြသလို တစ်ခါ နက္ခတ်ဗေဒင် Astrological Science Throry အရကတော့ Sidereal System နိယနစနစ်၏ အာယန ဒီဂရီ မြင့်လာလေလေ ကမ္ဘာမြေသို့ သဘာဝ ဘေးရန်များနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု အားကြီးလေ ဖြစ်မည်ဟု ဆိုထားရာ ယနေ့ ၂၀၁၂ တွင် နိယန စနစ်၏ အာယန အံသာ ဒီဂရီမှာ ၂၄ ဒီဂရီ ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ မပျက်နိုင်ပေမယ့် ကမ္ဘာမြေကြီး ပေါ်ဝယ် ရှေ့လျှောက် တစ်မူ ထူးခြားသော သဘာဝ ဘေးရန်များနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုတွေကတော့ ဧကန်ရှိလာ နေမှာဖြစ်သည်။
အာယန ဒီဂရီ တစ်ဒီဂရီကို ၇၂ နှစ် ကြာတတ်တာမို့ လာမည့် ၃၅ နှစ်အတွင်း အာယန ဒီဂရီ ၂၅ ဒီဂရီ မပြည့်ခင်မှာပင် ကမ္ဘာကြီး ၏ External – Internal Element တွေ ပြောင်းလဲလာမှာ ဖြစ်သလို ရေကြောမြေကြော များ စတင်ရွေ့လျား ပြောင်းလဲ လာနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤကမ္ဘာမြေ ပေါ်သို့ တစ်မူထူးခြားလို့ ကျရောက် လာနိုင်သော သဘာဝ ဘေးရန်များနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု များကိုကြိုတင် ကာကွယ်နိုင် သော နည်းလမ်းများ ကိုရှာ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု စီမံကိန်းများ ကိုတော့ ရေးဆွဲ ထားသင့်ပေသည်။
မာယန်တို့ ဟောကိန်းအတိုင်း နေကြီးပဲ ပေါက်ကွဲလို့ဖြစ်စေ Magnetic Pole Reverse သံလိုက်ဝင်ရိုးမှ သံလိုက်လှိုင်းများ လာရာ ဗြောင်းပြန်သွားလို့ ကမ္ဘာကြီး ဗြောင်းဆန်လို့ ပျက်သုဉ်း သွားတာမျိုးက လူသားတို့၏ ဘဝကို တစ်ကြိမ်ပဲ သေကျေပျက်စီး သွားစေနိုင်ပါ သည်။ သို့သော် တိုင်းပြည်၌ အမျိုးသားချင်း အာဃာတမီးတွေ လောင်ကျွမ်း နေခြင်းက တစ်မျိုးသားလုံးကို အရှင်လတ်လတ်သေ သွား စေနိုင်ပြီး နောက်ဆုံး ဇာတ်တူသားစားလို့ ဟင်္သာကိုးသောင်း ပျက်ကိန်းသို့ပင် ဧကန်ဆိုက်ရောက် သွားစေနိုင်ပါသည်။ http://www.thevoicemyanmar.com
Peter Vincent's photo.
>>>>>စောစော စီးစီး ဖတ်မိလိုက်တဲ့ ပို့ စ် လေးတစ်ခုပေါ့ ဗျာ<<<<<
သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂ မှာ မိုင်ယန်လူမျိုးတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်ကုန်ဆုံးဖို့
နီးကပ်လာတဲ့ တစ်ချိန်ထဲမှာဘဲ သိပ္ပံပညာ... ရှင်တွေ ကလဲ ဒီအချိန်လောက်မှာ ECD
(Earth Crust Displacement) လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဗဟိုအတွင်းပိုင်း
ရွေ့ရှားလာမှုကြောင့် (Polar Shifting) သံလိုက်စက်ကွင်းရဲ့
ဝင်ရိုးစွန်းတွေ နေရာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ တွက်ချက်ယူဆထားကြပါတယ်။
ဒီ သီအိုရီ ကို 1950 ပြည့်ကာစ နှစ်များကထဲက Charles Hutchins Hapgood
(May 17, 1904 – December 21, 1982) ဆိုတဲ့ Professor တစ်ဦးက
စတင်ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကျော် ရူပဗေဒ ပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Elbert
Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955) ကိုယ်တိုင် 1953 မှာ
• အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစုံစမ်းထောက်လှန်းရေးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ C .
I . A ( မူလ က Center of Information ထိုမှ Office of Strategic Services
ထိုမှ လက်ရှိ Central Intelligence Agency ဟုခေါ်ဝေါ် )
• အိမ်ဖြူတော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ စသည့်တာဝန်များကို
New England College (1966–1967) ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးများမှာ ပါမောက္ခ
အဖြစ်နဲ့ အမေရိကန်ရာဇဝင် ၊ သိပ္ပံပညာ ၊
ရှေးဦးလူသားမျိုးနွယ်များအားလေ့လာခြင်း (Anthropology) ဆိုင်ရာပညာရပ်များ
ကို နှစ် ၂၀ ကျော် သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါတယ်။
Springfield College မှာ ပညာသင်ကြားပို့ချနေစဉ်တုန်းက
တပည့်ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့ “ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးများ “
အကြောင်းမေးခွန်းကနေစတင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့် အပြင်းအထန်
စတင်သုသေသနပြုခဲ့ရင်း 1958 မှာ “The Earth's Shifting Crust “
(ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ရွေ့လျားနေသော အတွင်းပိုင်းလွှာ) ဆိုတဲ့
သူ့ရဲ့အဆိုအရကတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းအလွှာတွေထဲမှာ ချော်ရည်များရဲ့
ကမ္ဘာ့ဗဟိုက သံလိုက်လုံးကြီးဟာ တစ်ခါတရံ မူလအနေအထားကနေ
အဲ့ဒိလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းတွေရဲ့ အနေအထားကလဲ
ဒီလို ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ သံလိုက်ဓါတ်ရဲ့ ဆွဲငင်မှု အနေအထား ပြောင်းလဲသွားတာ
နဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကတော့ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရှိသမျှ
အဆောက်အအုံဆိုတာတွေရဲ့ ခံနိုင်မှုဆိုတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပြင်းထန်တဲ့
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ ပေ သောင်းနဲ့ချီမြင့်တဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးတွေကို
ခေါ်ဆောင်လာပြီး ကုန်းမြေပေါ်မှာ ရှိသမျှ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံးကို
မြေမျက်နှာပြင်တွေဟာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်း (Polar Shifting)
ရဲ့ အနေအထားပေါ်လိုက်ပြီး ကုန်းမြေပြတ်ရွေ့ခြင်း
တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် လို့ သူက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
9,600 BCE လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော်ခန့်ကလဲ ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးစွန်းဟာ
၁၅ ဒီဂရီထိ ရွေ့လျားသွားခဲ့တဲ့အတွက် “ ပျောက်ဆုံးသွားသော Atalantis “
လို့ခေါ်ကြတဲ့ Antarctica တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံး ရေအောက်ကို
ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်များအားလုံးက လက်ခံထားကြပါတယ်။
အဲ့ဒိလို မဖြစ်ခင်တုန်းက Antarctica တိုက်ကြီးဟာ သာမန်အပူချိန်နဲ့
ကုန်းမြေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလဲ ရှေးဦးလူသားတို့ ဆွဲထားခဲ့တဲ့
ကမ္ဘာ့မြေပုံတွေကို ကိုးကားပြီး သူက သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးဟာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ အကြီးအကျယ်ကြုံရပြီး
ကမ္ဘာပျက်ခြင်း “ လို့ခေါ်ပါတယ်။
ပြီးတော့မှ ပြန်လည် ငြိမ်သက်သွားတဲ့နောက် ဇီဝ မျိုးနွယ်သစ်တွေ
ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါ နောက်ထပ် ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုအနေနဲ့
ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ဟောခဲ့တာဖြစ်သလို ခရစ်ယာန် အစ္စလမ်
အစရှိတဲ့ဘာသာတိုင်းမှာလဲ တူညီစွာလက်ခံထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့
အဲ့ဒိလို လက်ခံထားကြတဲ့အထဲမှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ အထိဖြစ်လာမယ့်
တိကျစွာကြိုတင်သိရှိခဲ့တာကတော့ အာဖရိကန် တွေပြီးရင်
ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးမျိုးနွယ်စု ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ မိုင်ယန် ဆိုတဲ့
ဖွဲ့စည်းထားပြီးကမ္ဘာ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဖြစ်လာမယ့် အရေးအကြီးဆုံး
ယနေ့အချိန်ထိ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အရေးကြီး အဖြစ်အပျက်တွေ ဆူနာမီတွေ
ငလျင်တွေ စစ်ပွဲတွေ အားလုံးကိုပါ ထည့်သွင်းဟောကြားထားတာ အားလုံး
လွဲချော်မှုမရှိဘဲ မှန်နေသေးတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ဟာ နေ့ရက် အနည်းငယ် မဆိုစလောက်
ကွာခြားခဲ့တာလေးတွေရှိပေမယ့် ဖြစ်ပွားခဲ့တာကတော့ ကွက်တိဖြစ်နေတယ်လို့
အဲ့ဒိပြက္ခဒိန်ရဲ့ အထူးခြားဆုံး နဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့
ဒီပြက္ခဒိန်ဟာ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှာ အဆုံးသတ်နေပါတယ်။
ယနေ့ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ မိုင်ယန်လူမျိုးတွေအားလုံးကတော့ ဒီနေ့စွဲ
ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာဘဲ ရပ်သွားတာလို့
ဒီအချက်တွေအပြင် သူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ခါနီး မှာ ပြမယ်ဆိုတဲ့
နိမိတ်တွေကလဲ ထပ်မံတွေးခေါ်စရာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
(၁) ကမ္ဘာကြီးဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သဘာဝတရားကနေတဆင့်
စတင်ပြီး သိသိသာသာပြောင်းလဲ ဖေါက်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ပူရင် လူသားတွေ
ခံနိုင်တာထက် ပူပြီး အေးရင်လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
2008 လောက်စပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပူအအေးစံချိန်တွေ မိုးရေချိန်လက္မတွေ
အားလုံးသိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာခဲ့တာ အားလုံးအသိပါဘဲ။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်တော့ မိုးကပြင်းထန် ရေဟာတောင်လိုမြင့်လာတဲ့အထိ
ဖြစ်သွားလိုက်တာ ဒါမျိုး တစ်သက်လုံးမကြုံဖူးခဲ့တဲ့ မြန်မာ နဲ့
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတစ်ချို့ လူဦးရေသိန်းနဲ့ချီ သေကြေခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တုန်းကကျတော့ ကုန်းတွင်းမြေနိမ့်ပိုင်းလဲ မဟုတ်တဲ့
အေးချမ်းတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသ မှာ ရှိတဲ့ အင်းလေးကန်ကြီးပါ ခြောက်သွေ့သွားခဲ့တာ
မြန်မာပြည်မှာ ပူလွန်းလို့ ရေငတ်လို့ သေတဲ့သူဆိုတာ ပထမ
ဆုံးအကြိမ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာ အနှံ့အပြားပါဘဲ။
ကမ္ဘာမှာ ရာသီဥတု အမျှတဆုံးလို့ နာမည်ကျော်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ
မဖြစ်စဖူး မိုးရေချိန်လက္မများစွာ ကြာမြင့်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီး
နေရာတော်တော်များများ ရေကြီးပြီး ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ နောက် ဆုံးပါတ်မှာဆိုရင် မိုးဟာ
မြန်မာပြည်မိုးတွင်းလိုဘဲ နေ့ရောညပါ အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယား မိုးဟာ ထီးတောင်
ဆောင်းစရာမလိုလောက်အောင် ရေနည်းပြီး ရွာသွန်းချိန်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့်
မိနစ်ပိုင်းမှ နာရီ အနည်းငယ် အထိခန့်သာရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီ
နှစ်ရွာတဲ့မိုးဟာ မြန်မာပြည်မှာလိုဘဲ ရေအင်မတန်များပြီး ထီးမပါဘဲနဲ့
ဒါ့အပြင် ၂၀၁၀ တစ်နှစ်လုံးမှာ ပူတဲ့အချိန်ဟာ ပုံမှန်ရဲ့
သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ဘဲ ရှိခဲ့ပြီး ထူးခြားစွာ အအေးဓါတ်ပြင်းထန်နေပါတယ်။
ယ္ခုစာရေးနေချိန်မှာတောင် နေ့ခင်း ၁၂ နာရီ ဆိုပေမယ့် အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့
အေးစက်နေတာ ဒေသခံတွေတောင် ပြောစမှတ်ပြုနေရပါတယ်။
အမေရိကန်တွေ အထူးသဖြင့် New York မြို့ခံတွေ ခရစ္စမတ် ကာလ ကို အမြတ်တနိုး
နဲ့ White Christmas လို့ ခေါ်ကြတယ်ဆိုတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။
ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ခရစ္စမတ် အချိန်မှာ နှင်းတွေ ဖြူပြီးဖွေးနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာ
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီဇင်ဘာဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အအေးဆုံး
နှင်းအကျဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပါ များသောအားဖြင့် နှစ်ကူးပြီး တစ်လ နှစ်လ
အတွင်းမှာ မှ တကယ်နှင်းတွေ ပိုကျလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်တော့ ရုပ်ရှင်ထဲကထက် ပိုဆိုးတဲ့ နှင်းကျမှုကို ခရစ္စမတ် မှာ
New York မြို့ခံတွေ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
(၂) မိုးပေါ်က ငှက်တွေ မြေကြီးပေါ် ကျလာပြီး ရေထဲကငါးတွေ မြေကြီးပေါ်
တက်လာပါလိမ့်မယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုခုကြောင့်
ငှက်တွေ ငါးတွေ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ လူသားတွေမှာမရှိတဲ့ သဘာဝက ပေးထားတဲ့
ထူးခြားတဲ့ အာရုံခံစားနိုင်စွမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေ အုံလိုက်ကျင်းလိုက် စီတန်းပြီး တနေရာကို အစာတွေ
သယ်ပြီးသွားနေပြီ ဆိုရင် နောက်ထပ် ၁၂ နာရီ မှ ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာ မိုး
သို့မဟုတ် နှင်း အကြီးအကျယ်ရွာလေ့ရှိပါတယ်
ဒီလိုဘဲ မိုင်ပေါင်းထောင်သောင်းချီပြီး ခရီးဝေးသွားနိုင်ကြတဲ့ ငှက်တွေ
ငါးတွေဟာ Migrating လို့ခေါ်တဲ့ ရာသီအလိုက်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုတာကို
ပြုကြတဲ့အခါ သူတို့ ဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်း ကို ခံစားအသုံးချပြီး
သူတို့ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မယ့် အပူအအေးမျှတရာကို
ဒီအခါမှာ သူတို့ရဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းက အနေအထားစပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အခါမှာ
ဒီနေရာမှာ ရှင်းပြချင်တာက သူတို့ သွားလာရေးစနစ်က စာရှုသူတို့ကြားဖူးနေတဲ့
Navigation ဆိုတာတွေနဲ့ မတူပါဘူး။
ကိုယ်ရှိနေတဲ့ X Y Location ကို Satellite ကနေတဆင့် ပြန်ကြည့်ပြီး
သွားနေတာပါ ဒါပေမယ့် Polar Shift အရှိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ
ကမ္ဘာပါတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဗဟိုပြုပြီးသွားနေရတဲ့ GPS
Satellite တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်မှုတွေအားလုံးလဲ စတင် မှားယွင်းသွားနိုင်ပါတယ်
ဒီတော့ Polarity ပေါ်မှာ ခံစားပြီး Migrate လုပ်နေရရှာတဲ့ ငှက်တွေ ငါးတွေ
အားလုံး သွားဖို့ကြိုးစားတာက တစ်နေရာ ရောက်လာတာက တစ်နေရာ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
အဲ့ဒိတော့ အရမ်း ပူ/အေး လာလို့ သင့်တင့်မယ့်နေရာရှာပြီး
ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ငှက်တွေ ငါးတွေဟာ သူတို့ အားထားတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းက
လမ်းမှားခေါ်လာတဲ့အတွက် သူတို့ လုံးဝ မခံ နိုင်တဲ့ အပူချိန်
ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်သွားတော့ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ Heart
Attack (နှလုံးရုပ်တရက် ရပ်တံ့ခြင်း) ရပြီး
ဒါကြောင့် ငါးအသေတွေ သူတို့မျိုးစုတွေ နေလေ့မရှိတဲ့ ကမ်းစပ်မှာ
ဒေသခံ မဟုတ်တဲ့ ငှက်တွေ Arkansas နဲ့ Sweden မှာ ထောင်နဲ့ချီ မိုးပေါ်က
ပြုတ်ကျပြီးသေနေတာ.. တွေ စတင်တွေ့ရှိလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ဒီလောက်ရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ ကို အမေရိကန် အစိုးရက ဘာလို့ ဘာမှ မပြောဘဲ
ကြည့်နေမလဲ “ လို့ပေါ့
စိတ်ချပါ အမေရိကန် အစိုးရဟာ သူတို့ Handle မလုပ်နိုင်တဲ့ Conspiracy
(ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဖြစ်ရပ်) တစ်ခုကို ဘယ်တော့မှ အပြင်လူတွေကို
ဒီကိစ္စဟာ သာမန်ကိစ္စ မဟုတ်တဲ့ အတွက် သူတို့ Expose (ဖေါ်ထုတ်)
လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဖြစ်လာမယ့် Riot (အဓိကရုဏ်း) တွေ လူတွေ စိတ်ဓါတ်တွေကျပြီး
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လျှောက်လုပ်မှာ ဆိုးသွမ်းသောင်းကျန်း (Chaos)
ဒီ့အပြင် အဆိုးဆုံးက သူတို့ ဒါမျိုးတကယ်ကြုံလာရင် အစထဲက သမ္မတ နဲ့ မိသားစု
ရယ် အစိုးရ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက မိသားစု တစ်ချို့ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ကို မှ
မကယ်နိုင်သလို ကယ်ဖို့လဲ ကြိုးစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီစာကို English နဲ့ ရေးမလို့ လုပ်ပြီး မြန်မာ လိုဘဲ
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာတွေ ဗဟုသုတတွေ ခုဖြစ်လာတဲ့ သက်သေသာဓကတွေ ကို
မူတည်ပြီး ဒီစာလေးကို အားလုံးသိသင့်တယ် ထင်လို့ရေးလိုက်တာပါ။
သေမယ့်နေ့ကိုသာ ကြိုပြီး တိတိကျကျ သိခွင့်ရခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး
အခုမြင်နေရတဲ့ နိမိတ်တွေအရကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကမ္ဘာမြေကြီး ကို
မကြာခင် နှုတ်ဆက်စွန့်ခွာ သွားရတော့မယ်ဆိုတာ သေချာနေသလောက်ရှိနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး လာတုန်းကလဲ တစ်ယောက်ထဲပါဘဲ...
ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အတူတူတစ်ချိန်ထဲ သွားကြရမယ်ဆိုတာ
ရတောင့်ရခဲ အခွင့်အရေးလို့ဘဲ မှတ်လိုက်ပါ...
အဲ့ဒိနေ့က အရမ်းကို နီးကပ်နေပြီဆိုတာ အခု သိပြီးပြီ ဆိုရင်
လုပ်ချင်တာတွေထဲက အကောင်းဆုံးဆိုတာလေးတွေ စလုပ်ကြပါ...
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ ကို ကူညီလိုက်ပါ...
BY YeYint Nge ... 12/16/2012 1 comment
Sunday, 16 December 2012 13:44
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သီရိမင်္ဂလာဈေးရှိ လူမိုက်အဖွဲ့များအား ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန် ပိတောက်ချောင်းရဲစခန်းကို အင်အားအပြည့် ချထားပြီး စောင့်ကြည့်အရေးယူနေကြောင်း သိရသည်။
သီရိမင်္ဂလာဈေးရှိ လူမိုက်များမှာ ယခင်ကဲ့သို့ တုတ်၊ ဓား စသည့်လက်နက်ပုန်းများကို ခန္ဓာကိုယ်တွင် မထားရှိတော့ဘဲ နေရာတစ်နေရာတွင် ၀ှက်ထားသည့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေကြောင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ဒုတိယရဲမှူးကြီး မျိုးအောင်က “သီရိမင်္ဂလာဈေး အပိုင်ဖြစ်တဲ့ ပိတောက်ချောင်း ရဲစခန်းကို အင်အားအပြည့် ချထားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အဲဒီစခန်းက တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုလည်း ဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပဲ တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ အခု လူမိုက်တွေက ကိုယ်ပေါ်မှာ ဓားတွေမထားတော့ဘဲ နေရာတစ်နေရာမှာပဲ ဖွက်ထားတယ်။ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့် အရေးယူသွားမှာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
လှိုင်မြို့နယ် သီရိမင်္ဂလာဈေးသို့ လာရောက်သည့် ကားများ၊ ဈေးသည်များအား လူမိုက်အဖွဲ့များက ခြိမ်းခြောက်၍ တရားမ၀င် ငွေကြေးကောက်ခံမှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် စောင့်ကြည့်အရေးယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်
၁၃၇၄ ခု၊ နတ်တော်လဆန်း ၂ ရက်
၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး အတွက် သပိတ်စခန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်နေမှုအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မီးခိုးဗုံးများ အသုံးပြုပြီး လူစုခွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၌ သံဃာတော်အချို့နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့မှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂။ ကော်မရှင် အနေဖြင့် အဆိုပါ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရသည့် လူနာများအား မန္တလေးမြို့ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့် ကန်တော်နဒီ ဆေးရုံများသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှုများအား စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော်သည် မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် လူနာများအား တာဝန်ယူလျက် ရှိပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသရန် လိုအပ်သော သံဃာတော် ဦးတိက္ခဉာဏအား ဘန်ကောက်ဆေး ရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်မှ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁)သန်းတိတိကိုလည်း ၁၄-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ဘန်ကောက်ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၄။ နိုင်ငံတော်မှ ထိုသို့ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေရာတွင် အကူအညီ လိုအပ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သို့ ဆက်သွယ် တောင်းခံနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
တောင်းပန်ပွဲသို့ ဒဏ်ရာရ ရဟန်းများပါ တက်ရောက် ....
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ- မောင်ဘဦး (မန္တလေး)
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် မီဒီယာမျ...
မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်မရောင်းပါဖူးလို့ အိန္ဒိယအရာရ...